MAKA Formosa X RCTP Taiwan Taoyuan Intl Airport FSX & P3D - Rikoooo
downloads 24 857
Onye edemede: Ịrụ Chiang, Rudolf Liu, Jack Su, na Mike Huang
Emelitere na 02 / 07 / 2015: nkwalite site na ụdị 1.0 gaa na 1.1, imeghari ka P3D v1.x v2.x, FSX Ntugharị Steam, ndozi dị iche iche na ndozi edozi
Ihe oru ngo a na - ewete ndabara FSX ihe nlere ka ihu ya nke oma n’ile anya Taoyuan International Airport dika odi na 2012. A na-eme ụlọ ikuku niile na akara ala dị nso site na iji GMax, gụnyere radars na animated na People Movers.
Runways, taxiways, na Uwe Mkpuchi Akwa e repositioned dabeere na satellite imagery. Aircraft adọba ụgbọala e emelitere-eji ndị ọhụrụ real-ụwa AIP. A photoreal teren nke Taoyuan ebe, plus landclass ndozi, a na-gụnyere.
Mbido ahụ mara mma ma kwupụta onwe ya FSX. Goga nke ọdụ ụgbọ elu a ga-edebanye aha RCTP na ubi "Airport koodu" (ICAO) si gị ụgbọ elu manager
N'okpuru ebe a bụ ndị photo-ezi uche ebe-akwado site na ebe ndị mara mma
Termial 2 n'abalị